Kickboxing – Mondial :: Nahazo 5 tapitrisa ariary ny ekipam- pirenena ho any Sarajevo • AoRaha
Kickboxing – Mondial Nahazo 5 tapitrisa ariary ny ekipam- pirenena ho any Sarajevo
Tso-drano. Noraisin’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Ralaivao Lovatiako, sy ny Tale jeneraly misahana ny fandrindrana ny fotodrafitrasa, Raherinjanahary Pierre Raymond, omaly, teny amin’ny biraon’ny minisitera Ambohijatovo, ny delegasiona malagasy hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an’ny taranja kickboxing any Sarajevo, Bosnie Herzegovine.
Nomen’ny minisitera vola mitentina 5 tapitrisa ariary hatao vatsin-dalana izy ireo, hoentina miatrika ny fifaninanana maneran-tany amin’ny 19 – 27 oktobra 2019. Ankoatra izay, dia ny fanjakana Malagasy ihany koa no nanampy tamin’ny saran-dalana hahafahan’izy ireo mihazo an’i Sarajevo.
Mpikatroka enina mianadahy (Duco, Mathieu, Tahiry, Lavakely, Jessy ary Miora Tiana) no hiaro ny voninahi-pirenena. “Vatsin-dalana no homena anareo amin’izao ho mariky ny tso-drano avy amin’ny minisitra, izay soloiko tena. Rehefa mahazo medaly ianareo avy any dia mampanantena tamby ho anareo, tahaka ireo efa nahazo izany, ny fitondram-panjakana malagasy, tarihin’ny Filoha Rajoelina Andry”, hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Ny sekretera jeneralin’ny Federasiona sy ny tale teknika nasionaly no nitondra azy ireo tany.
Fifidianana filohan’ny CAF Ho fantatra amin’ny 2021 izay hisolo ny toeran’i Ahmad
Fifaninana mitanisa baolina Tafakatra amin’ny dingana manaraka i Fyarivelo
Taranja bisikileta Lasibatry ny valanaretina ny andavanandron’ireo mpivoy
Baolina kitra – Fanazarantena Manomboka miverina an-kianja ireo mpilalaon’ny Barea
Baolina lavalava – « Gold Top 20 » :: Hikatsaka fandresena fahatelo ny FT Manjakaray